YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, August 18
18 August 2010 ဒိုင်ယာရီ
http://www.mediafire.com/file/mdwa0wbbkjif7s4/18%20August%202010%20yeyintnge%27s%20Diary.docx http://www.mediafire.com/file/jbc9la9cahredd3/18%20August%202010%20yeyintnge%27s%20Diary.pdf18 August 2010 Yeyintnge's Diary Summary only...
သောမတ်စ် မောင်ရွှေ | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၂၁ မိနစ်ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းတင်သည် ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က အင်တာဗျူး တခုတွင် မြန်မာ စစ်အစိုးရက ကျူးလွန်ခဲ့သော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ အတွက် ကုလသမဂ္ဂမှ ကော်မရှင်တရပ်ဖွဲ့၍ စုံစမ်း စစ်ဆေးပေးရန် အကြံပြု ပြောဆိုမှုများအား ထောက်ခံရန် ကနေဒါ အစိုးရနှင့် အခြားနိုင်ငံများအား တောင်းဆိုလိုက်သည်။မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက အတိုက်အခံပါတီ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် မတ်လက ပါတီ၏ ရုံးချုပ်တွင် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်မှုနှင့် တရားမျှတမှု မရှိနိုင်သဖြင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မပြုရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ပြီးနောက် ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းတင်ကို တွေ့ရစဉ်။ ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က ဦးဝင်းတင်သည် မြန်မာစစ်အစိုးရက ကျူးလွန်ခဲ့သော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများအတွက် ကုလသမဂ္ဂမှ ကော်မရှင်တရပ်ဖွဲ့၍ စုံစမ်း စစ်ဆေးပေးရန် အကြံပြု ပြောဆိုမှုများအား ထောက်ခံရန် ကနေဒါ အစိုးရနှင့် အခြားနိုင်ငံများအား တောင်းဆိုခဲ့သည်။ (ဓာတ်ပုံ - မဇ္ဈိမ)မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက အတိုက်အခံပါတီ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် မတ်လက ပါတီ၏ ရုံးချုပ်တွင် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်မှုနှင့် တရားမျှတမှု မရှိနိုင်သဖြင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မပြုရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ပြီးနောက် ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းတင်ကို တွေ့ရစဉ်။ ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က ဦးဝင်းတင်သည် မြန်မာစစ်အစိုးရက ကျူးလွန်ခဲ့သော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများအတွက် ကုလသမဂ္ဂမှ ကော်မရှင်တရပ်ဖွဲ့၍ စုံစမ်း စစ်ဆေးပေးရန် အကြံပြု ပြောဆိုမှုများအား ထောက်ခံရန် ကနေဒါ အစိုးရနှင့် အခြားနိုင်ငံများအား တောင်းဆိုခဲ့သည်။ (ဓာတ်ပုံ - မဇ္ဈိမ)သြစတြေးလျ၊ ဗြိတိန်၊ ချက်ပြည်ထောင်စု၊ ဆလိုဗက်ကီးယားနှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံတို့သည် ထိုကဲ့သို့ ကော်မရှင် တရပ်ဖွဲ့၍ စုံစမ်း စစ်ဆေးပေးရန်အတွက် ထောက်ခံမည်ဟု ကတိကဝတ် ပြုခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သည်။ “မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေမှုတွေဟာ အရမ်း ဆိုးဝါး ပြင်းထန် လွန်းတဲ့အတွက် အခုလိုမျိုး စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ လိုပါတယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေ အတွက်လည်း အချက်ပေး ခေါင်းလောင်းထိုးသံ တခု ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အားထားရသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် တဦးဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည့်အတွက် ထောင်ဒဏ် ၁၉ နှစ်ခန့် အကျဉ်းချခြင်း ခံခဲ့ရသူ ဦးဝင်းတင် က မဇ္ဈိမသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ကနေဒါ အစိုးရထံသို့ ကနေဒါ ပါလီမန် အမတ် ၆၃ ဦးနှင့် ဆီးနိတ်အမတ် ၁၂ ဦးတို့က မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများအား ကုလသမဂ္ဂမှ ကော်မရှင်ဖွဲ့ စစ်ဆေးရေးကို တိုက်တွန်းရန် အတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးကာ ပန်ကြားခဲ့သည်ကို ရည်ညွှန်း၍ ဦးဝင်းတင်က “ကနေဒါ နိုင်ငံဟာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ကော်မရှင်ဖွဲ့စစ်ဆေးရေးကို ထောက်ခံလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီလို စစ်ဆေးဖို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အထူးလိုအပ်နေပါတယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ယခုနှစ် မတ်လက ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး သံတမန် မစ္စတာ သောမတ်(စ်) အိုဂျေ ကွင်တားနားက ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီထံသို့ အစီရင်ခံစာတစောင် တင်ပြခဲ့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများသည် စနစ်တကျ ကျူးလွန်နေသည့် ပုံစံဖြစ်နေပြီး အစိုးရအရာရှိများ၊ စစ်အာဏာပိုင်များနှင့် တရားရေးရာဌာနများကပါ ပါဝင်ကျူးလွန်နေသည့် ပုံစံမျိုးဖြစ်နေသည်ဟု ပါရှိသည်။ မြန်မာ စစ်အစိုးရ၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ဖြစ်စဉ်များအား နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်ခုံရုံး၏ ဖွင့်ဆို သတ်မှတ်ချက်အရ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးကို ဆန့်ကျင်သည့် စစ်ရာဇဝတ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းလည်း ထိုအစီရင်ခံစာထဲတွင် ဖော်ပြထားသည်။ကွင်တားနားသည် ထိုအစီရင်ခံစာထဲတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုများအတွက် ကော်မရှင်တခုဖွဲ့စည်း၍ ထပ်မံအသေးစိတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ကုလသမဂ္ဂအား အကြံပြု တိုက်တွန်းထားသည်။ကနေဒါနိုင်ငံ မြန်မာ့မိတ်ဆွေများအဖွဲ့ (CFOB) မှ အလုပ်အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ တင်မောင်ထူးက မဇ္ဈိမသို့ “မစ္စတာ ကွင်တားနားရဲ့ အစီရင်ခံစာက ကုလသမဂ္ဂ အနေနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို စနစ်တကျ စုံစမ်း စစ်ဆေးဖို့ လေးလေးနက်နက် အကြံပြုထားပါတယ်။ ဒါကို လျစ်လျူရှုလိုက်ဖို့ မသင့်ပါဘူး။ ကနေဒါ အပါအဝင် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂက မစ္စတာကွင်တားနားရဲ့ အကြံပြုချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့၊ မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို စစ်ဆေးပေးဖို့ တိုက်တွန်းသင့်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က CFOB အဖွဲ့သည် ဘားမားကမ်ပိန်း (ယူကေ) အဖွဲ့နှင့် ပူးတွဲကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာတွင် ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Lawrence Cannon အား ကွင်တားနား၏ အကြံပြုချက်ကို တွန်းအားပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ကနေဒါ ဝန်ကြီးချုပ် Stephen Harper ၏ အစိုးရ အဖွဲ့သည် မြန်မာအတိုက်အခံများကို အစဉ်အမြဲထောက်ခံလေ့ ရှိသဖြင့် ယခုကွင်တားနား၏ အကြံပြုချက်ကိုလည်း ထောက်ခံရန် တောင်းဆိုထားသည်။ဘားမားကမ်ပိန်း၏ ဒါရိုက်တာ Mark Farmaner က အဖွဲ့၏ ကြေညာချက်ထဲတွင် “ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး သံတမန်ရဲ့ အကြံပြုချက်ဖြစ်တဲ့ ကော်မရှင်ဖွဲ့စစ်ဆေးရေးကို ကနေဒါနိုင်ငံက ထောက်ခံကြောင်း တရားဝင် မထုတ်ပြန်သေးတဲ့အတွက် အလွန်အံ့သြမိပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း မြောက်များစွာရဲ့ ထောက်ခံမှုကို ကျနော်တို့လိုအပ် နေပါတယ်။ ကနေဒါ နိုင်ငံရဲ့ နှုတ်ဆိတ်နေမှုဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရကို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို ဆက်လက်ကျူးလွန်စေဖို့ အားပေးသလို ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်” ဟု တိုက်တွန်းထားကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။ကနေဒါနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Laura Markle က မဇ္ဈိမသို့ ပြောကြားရာတွင် ကနေဒါ နိုင်ငံသည် ဦးဝင်းတင် တိုက်တွန်းသည့် ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်၍ ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ရန်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ကနေဒါမှ အိုင်ဗင်ဟိုး သတ္ထုတွင်း ကုမ္ပဏီအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ဦးဝင်တင်က တိုက်တွန်းဦးဝင်တင်သည် ကနေဒါအစိုးရက ဗန်ကူးဗား အခြေစိုက် အိုင်ဗင်ဟိုး သတ္ထုတွင်း ကုမ္ပဏီအား လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ရှိမရှိနှင့် ကနေဒါနိုင်ငံမှ မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် စီးပွါးရေး အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများအား အိုင်ဗင်ဟိုးမှ ချိုးဖောက်နေမှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကိုလည်း တောင်းဆိုခဲ့သည်။မဇ္ဈိမသတင်းဌာန၏ ဇွန်လက သတင်းတပုဒ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ မုံရွာတွင် ကြေးနီသတ္ထုမိုင်းလုပ်ငန်းကို ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာအိုင်ဗင်ဟိုး ကြေးနီကုမ္ပဏီလီမိတက် (MICCL)၏ အစုရှယ်ယာ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း ကို တရုတ်လက်နက်ကုမ္ပဏီကြီး နိုရင်ကို (Norinco) နှင့် တရုတ်သတ္တုကုမ္ပဏီကြီး တခုဖြစ်သော ချိုင်းနားကိုးလ် (Chinacol) တို့နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိသည့် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ လက်ရင်းလူယုံများကို လျှို့ဝှက်စွာ ရောင်းချခဲ့ကြောင်း ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် လျှို့ဝှက်သတင်းရပ်ကွက်တခုက အတည်ပြုပြောကြားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ဖူးသည်။ဦးဝင်းတင်က အိုင်ဗင်ဟိုးအနေဖြင့် မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် လက်ရင်းလူယုံများအား မုံရွာရှိ ရှယ်ယာများအား ရောင်းချလိုက်သည် ဆိုသော သတင်းများကြောင့် အထူးစိုးရိမ်မိကြောင်းနှင့် ထိုအပြုအမူသည် ကနေဒါနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ပြဌာန်းထားသော အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ “ကျနော်တို့ အသေးစိတ်မသိရပေမယ့် အိုင်ဗင်ဟိုး ကုမ္ပဏီဟာ သူတို့ရဲ့ အစုရှယ်ယာတွေကို တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ပတ်သတ်နေတဲ့သူတွေကို ရောင်းလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကနေဒါအနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို စုံစမ်း စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်” ဟု ဦးဝင်းတင်က ပြောကြားခဲ့သည်။လူ့အခွင့်အရေးအုပ်စုများ တောင်းဆိုနေကြသော အချက်ဖြစ်သည့် ‘အိုင်ဗင်ဟိုးအနေဖြင့် ကနေဒါ ပါလီမန်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပါဝင်ပတ်သတ် လုပ်ကိုင်နေသည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ၄င်းမြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားရသည့် အကြောင်းရင်းများကို ရှင်းလင်းပြောဆိုသင့်သည်’ဟူသော အချက်အား ကမ္ဘာသိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားဟောင်း တဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းတင်က သဘောတူသည်ဟု ဆိုသည်။ပြီးခဲ့သည့်လက အန်အယ်လ်ဒီ လွှတ်တော်အမတ် ဦးခွန်မြင့်ထွန်းသည် ကနေဒါ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Cannon ထံသို့ ကနေဒါ အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် အိုင်ဗင်ဟိုး ကုမ္ပဏီ၏ ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူ ဦးသက်လွင် အဖမ်းခံခဲ့ရသည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်၍ စုံစမ်းဖြေရှင်းပေးရန် တရားဝင်တိုက်တွန်းစာတစောင် ပို့ခဲ့သည်။ ဦးသက်လွင်သည် ၄င်း၏ အထက်အရာရှိဖြစ်သူ အိုင်ဗင်ဟိုးကုမ္ပဏီမှ အဆင့်မြင့်ဘူမိဗေဒ ပညာရှင် Andrew Mitchellက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျနေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်သို့ သွားရောက်လိုသဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အကျဉ်းအချခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်သို့ မောင်းနှင်သွားပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဦးသက်လွင်နှင့် မစ္စတာ Andrew Mitchell တို့ နှစ်ဦးစလုံး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်း ခံခဲ့ရပြီး ဗြိတိသျှနိုင်ငံသားဖြစ်သည့် မစ္စတာ Mitchell အား မကြာခင် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သော်လည်း ဦးသက်လွင်ကိုမူ ထောင်ဒဏ် ၇နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်ဟု ဦးသက်လွင်၏ မိသားစုက ပြောခဲ့သည်။ဦးခွန်မြင့်ထွန်းကဲ့သို့သော လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများသည် ဦးသက်လွင် အင်းစိန်ထောင်ထဲတွင် ဆုံးပါးသွားမည်ကို စိုးရိမ်သည့်အတွက် ကနေဒါ အစိုးရအနေဖြင့် အိုင်ဗင်ဟိုး ကုမ္ပဏီအား ထိုအမှုကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်၍ စစ်ဆေးပေးရန် အလိုရှိနေကြသည်။ ဦးခွန်မြင့်ထွန်း၏ ပေးစာထဲတွင် အိုဗင်ဟိုး ကုမ္ပဏီနှင့် ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဌဖြစ်သူ Robert Friedland တို့မှ ထိုကိစ္စအား သိရှိကြောင်း ဝန်ခံပြောဆိုရန် အချိန် ၅နှစ်ကျော် ယူခဲ့သဖြင့် ၄င်းတို့ကို အပြစ်တင်ထားသည် ဟုဆိုသည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်အတွင်း အကျဉ်းချခြင်း ခံခဲ့ရသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဦးခွန်မြင့်ထွန်းက “ကိုသက်လွင် အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အိုင်ဗင်ဟိုး ကုမ္ပဏီ အနေနဲ့ အရေးတယူ ဂရုစိုက်မှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကိုသက်လွင်နဲ့ သူ့ရဲ့မိသားစုအနေနဲ့ အရမ်းခံစားနေရမှာပါ။ အိုင်ဗင်ဟိုးက ကိုသက်လွင်ကို ပြုမူတဲ့ပုံစံကတော့ တကယ့် ရာဇဝတ်သားတယောက်ကို ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေတယ်” ဟု မဇ္ဈိမသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/5886-2010-08-18-15-57-27.html
စစ်အစိုးရကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမည့် ကော်မရှင် အမေရိကန် ထောက်ခံ
စစ်အစိုးရကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမည့် ကော်မရှင် အမေရိကန် ထောက်ခံ ဧရာဝတီ Wednesday, August 18, 2010 မြန်မာ စစ်အစိုးရ၏ စစ်ရာဇ ဝတ်မှုများနှင့် လူသား မျိုးနွယ် အပေါ် ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ် မှုများကို စုံစမ်း စစ်ဆေးမည့် လွတ်လပ်သော ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းရေးကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ထောက်ခံရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း အမေရိကန် စာနယ်ဇင်းများက ဖော်ပြသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ၏ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း နယူးဒေလီမြို့တွင် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများက ဆန္ဒပြပြီး ပိုစတာများ ဖြန့်ကြဲထားစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ - Reuters)စစ်အစိုးရနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး မူဝါဒကို ပြည်လည် သုံးသပ်ပြီးနောက် အမေရိကန် အစိုးရက ယင်းသို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ခေါင်းဆောင်သော စစ်ခေါင်းဆောင်များကို အဓိက ပစ်မှတ်ထားပြီး အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား အစိုးရ၏ ယမန်နှစ်က စတင် ကျင့်သုံးခဲ့သည့် မအောင်မြင်သော စစ်အစိုးရနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး မူဝါဒကို ထင်ဟပ်နေသည်။အမေရိကန် အစိုးရက တရားဝင် ထုတ်ဖော် ကြေညာခြင်း မရှိသေးသော်လည်း ထိုသို့ ထောက်ခံရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာနှင့် နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ (Foreign Policy) မဂ္ဂဇင်း တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ကို ထောက်ခံရန် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် စစ်အစိုးရက နိုင်ငံတကာ၏ အသိအမှတ်ပြုမှုကို ဂရုမစိုက် ဘဲ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဟု ကြေညာပြီး မကြာမီ ထွက်ပေါ်လာခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။“အဓိက အရေးကြီးသည်မှာ မြန်မာပြည်သူများထက် စစ်ခေါင်းဆောင်တစု၊ အထူးသဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကို ပစ်မှတ် ထားခြင်း ဖြစ်သည်” ဟု အမေရိကန် အစိုးရ အဆင့်မြင့် အရာရှိတဦးကို ကိုးကား၍ ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာက ဖော်ပြသည်။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းရေးကို အဓိက တိုက်တွန်းသူမှာ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူး ကိုယ်စားလှယ် သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တာနာ ဖြစ်သည်။“ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုများကို ထုတ်ဖော် မေးမြန်းမည့် ကော်မရှင် တရပ် ဖွဲ့စည်းရန် စဉ်းစားသင့်ပါသည်” ဟု ကင်တာနာ က မတ်လအတွင်း၌ တင်သွင်းသော အစီရင်ခံစာတွင် တိုက်တွန်းထားသည်။ယင်းအစီရင်ခံစာသည် စစ်အစိုးရအပေါ် ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူရန် ကြိုးပမ်းနေသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မြန်မာ အတိုက်အခံ အင်အားစုများ၏ မျှော်လင့်ချက်ကို မြင့်တက်စေပါသည်။ကုလသမဂ္ဂ အနေဖြင့် နောက်လတွင် ကျင်းပမည့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ယင်းသို့ သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်မျိုး ဖွဲ့စည်းရေး မိတ်ဆက်တင်ပြနိုင်ရန် လမ်းပွင့်သွားသည်ဟု နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ မဂ္ဂဇင်းက ရေးသားထားသည်။ အိုဘားမား အစိုးရသည် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် ထိုကော်မရှင်ဖွဲ့ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ကျရေး အတွက် ဖိအားပေးနိုင်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းကို ၎င်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှ ဆောင်ရွက်ပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ မဂ္ဂဇင်းကြီးက ဆက်လက် ရေးသားထားသည်။ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာက ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီတွင် တရုတ်က ကန့်ကွက်သည့်တိုင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေး ရေး ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖွယ် ရှိကြောင်း သုံးသပ်ထားသည်။ စစ်ရာဇဝတ်မှုများဖြင့် အရေးယူခံနေရသည့် ဆားဘီးယား ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဆလိုဘိုဒန် မီလိုဆီဗစ် နှင့် ယခုလောလောဆယ်တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ သည်ဟိဂ်မြို့၌ တရား ရင်ဆိုင် နေရသည့် လိုက်ဘေးရီးယား သမ္မတဟောင်း ချားလ်စ် တေလာ တို့ကို ဝါရှင်တန်ပို့စ်က ဥပမာပေး ဖော်ပြထားသည်။နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ မဂ္ဂဇင်းတွင် “စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းရေး ဆုံးဖြတ်ချက်သည် မြန်မာစစ်အစိုးရ အမြောက် အမြား ကျူးလွန်ထားသော ရာဇဝတ်မှုများ၏ အကျိုးဆက်များကို ထင်ဟပ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံရေးပါတီက ထိုကဲ့သို့သော ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းရေးကို ထောက်ခံကြောင်း၊ စစ်အစိုးရသည် ဒီမိုကရေစီရေးကို ရှေးရှုသော လုပ်ရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းနှင့် စစ်အစိုးရအား အရေးယူရန် အမေရိကန်လွှတ်တော်၏ ညီညွတ်စွာ တောင်းဆိုမှု အကျိုးဆက် ဖြစ်ကြောင်း” ရေးသားထားသည်။“မြန်မာပြည်က ရေပေါ်ဆီ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ မျိုးဆက်တခုလုံး လာမယ့် နှစ် အနည်းငယ်အတွင်းမှာ တခုခု ရွေးချယ်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို အဓိက ရည်ရွယ်ပါတယ်” ဟု အမေရိကန် အဆင့်မြင့် အရာရှိတဦးကို ကိုးကား၍ ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာက ဖော်ပြထားသည်။အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်က မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး မူဝါဒသစ်ကို ကြေညာပြီး တနှစ်နီးပါး ကာလအတွင်း၌ အမေရိကန်-မြန်မာ အစိုးရအဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို နှစ်ကြိမ်တိုင် ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း မည်သည့်ရလဒ်မှ ထွက်မလာသည့်အပေါ် စိတ်ပျက်မှုကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။အမေရိကန် အစိုးရ အဆင့်မြင့် အရာရှိ ၂ ဦးက နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ မဂ္ဂဇင်းသို့ ပြောကြားရာတွင် အမေရိကန်အနေဖြင့် မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းရေးကို ထောက်ခံအားပေးသော်လည်း စစ်အစိုးရနှင့် ထိတွေ့ ဆက်ဆံရေး မူဝါဒကိုမူ ဆက်လက် ကိုင်စွဲထားမည်ဟု ဆိုသည်။တဦးသော အမေရိကန် အဆင့်မြင့်အရာရှိက“မြန်မာ စစ်အစိုးရကို သံတမန်နည်းလမ်းနဲ့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံရာမှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ရလဒ်ကောင်းတွေ မရခဲ့ပါဘူး”ဟု ပြောသည်။ထောင်နှင့်ချီနေသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ပြန်လည် လွတ်မြောက်ရေးနှင့် မြန်မာပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း ပိုမိုပွင့်လင်း မြင်သာစေရန် ဖိအားပေးသည့် အနေဖြင့် အိုဘားမားအစိုးရသည် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများကို ထပ်မံတင်းကျပ်ရန် စဉ်းစားနေသည်ဟု ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာ၏ ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဝါရှင်တန် အခြေစိုက် ဧရာဝတီ သတင်းထောက် Lalit K Jha ပူးပေါင်း ရေးသားသည်။http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/1-news/3855-2010-08-18-08-18-57
U Win Tin presses Canada to support UN inquiry
Wednesday, 18 August 2010 16:52 Thomas Maung Shwe Chiang Mai (Mizzima) – Win Tin, co-founder of Burma’s National League for Democracy, in an interview last week called on the government of Canada and other nations to support the appeal foraUN commission of inquiry into human rights abuses committed by the Burmese regime.Australia, Britain, the Czech Republic, Slovakia, and yesterday the United States, have pledged their support for such an investigation.Win Tin told Mizzima: “In Burma human rights violations are very severe and this why we need such an investigation to document what has happened.” The close ally of Aung San Suu Kyi, who has spentatotal of 19 years in detention for his defiance of Burma’s rulers, said the military regime’s violence had also “takenasharp toll on the country’s ethnic people”. Noting that 63 elected Canadian members of Parliament and 12 Senators had signedapetition urging the Canadian government to push the UN for such an inquiry, Win Tin said: “I hope Canada takes this opportunity to advocate foraUN commission of inquiry because this is what Burma needs.”In March, the UN special rapporteur on the human rights situation in Burma, Tomas Ojea Quintana, issuedareport to the UN Human Rights Council, which stated that in Burma there existedapattern of “gross and systematic” human rights abuses that suggested the abuses wereastate policy that involved authorities at all levels of the executive, military and judiciary. It also stated that the “possibility exists that some of these human rights violations may entail categories of crimes against humanity or war crimes under the terms of the Statute of the International Criminal Court”.Quintana urged the UN to further look into rights abuses committed by the Burmese regime and consider launchinga“commission of inquiry withaspecific fact-finding mandate to address the question of international crimes”. Tin Maung Htoo Executive director of the Canadian Friends of Burma (CFOB) told Mizzima that: “Quintana’s thorough report strongly suggests that the UN further investigate the systematic human rights violations in Burma. His report shouldn’t just be ignored; member states of the UN including Canada must push the UN to follow through on Quintana’s recommendations and further investigate the human rights violations which have occurred.”Last week, the CFOB issuedajoint statement with colleagues at the Burma Campaign UK to publicly ask Canadian foreign minister Lawrence Cannon to come out in favour of such an inquiry. The government of Prime Minister Stephen Harper, usuallyastrong advocate for Burma’s opposition, has yet to respond to Quintana’s recommendations.Burma Campaign director Mark Farmaner was quoted in the statement as saying: “It is very surprising Canada has not publicly stated that it supports the recommendation of the special rapporteur foracommission of inquiry. We need as many countries as possible on the record with their support. Canada’s silence will encourage the dictatorship that they can continue to get away with their crimes.”Laura Markle,aspokeswoman for Canada’s Ministry of Foreign Affairs and International Trade, had indicated to Mizzima that Canada was going to releaseastatement regarding the issues raised by Win Tin, but no such statement has to date been forthcoming.Win Tin also urges Canada to investigate Ivanhoe MinesWin Tin also called on the Canadian government to investigate whether Vancouver-based Ivanhoe Mines had committed human rights abuses in Burma and violated Canada’s targeted sanctions against the regime led by Senior General Than Shwe.Mizzima reported in June that the secretive trust established to oversee Ivanhoe’s Burmese holdings sold the firm’s 50 per cent stake in the Myanmar Ivanhoe Copper Company Limited (MICCL), the joint venture that operated Burma’s Monywa copper mine, to cronies of the Burmese regime acting as middle men for Chinese state-run weapon’s firm Nornico and mining giant Chinalco.Win Tin, said he was deeply concerned by reports that Ivanhoe used businessmen closely connected to Burma’s despotic leader Than Shwe to sell its stake in Monywa inamanner that had violated Canadian sanctions. “While we don’t know the details, we know that Ivanhoe sold their share to the Chinese and Canada should look into this” he said. The internationally recognised former political prisoner said he agreed with calls from rights groups that Ivanhoe’s senior executives should appear before the Canadian Parliament to answer questions about the firm’s Burmese operations and its apparent departure from the country. Last month, NLD MP-elect Khun Myint Tun wrote formally to foreign minister Cannon and asked the Canadian government to investigate the circumstances surrounding the arrest and subsequent jailing of Ivanhoe’s Burmese driver Thet Lwin. He was detained after his boss Andrew Mitchell,asenior Ivanhoe geologist in Burma, demanded to be driven to the home of NLD general secretary Suu Kyi, who remains under house arrest.After driving to the lakeside residence both Thet Lwin and Mitchell were detained by the soldiers who act as her jailers. Mitchell,aBritish national was quickly released, but Thet Lwin, according to his family, was sentenced to seven years in prison for doing what his superior had foolishly ordered him to do.Rights activists such as Khun Myint Tun fear that Thet Lwin died in Insein Prison and want the Canadian government to force Ivanhoe to disclose all it knows about the incident that led to his arrest.In his letter to the Canadian government, Khun Myint Tun condemned Ivanhoe and the firm’s chairman, Robert Friedland, for taking more than five years to publicly acknowledge that they were familiar with the case. Khun Myint Tun, himselfapolitical prisoner from 1996 to 2003, told Mizzima that “had Ivanhoe been more forthcoming with what happened to Ko Thet Lwin immediately following his arrest, it is very likely he and his family could have been spared great suffering, the way Ivanhoe has dealt with this case is criminal”. http://www.mizzima.com/news/world/4258-win-tin-presses-canada-to-support-un-inquiry.html
http://www.mediafire.com/file/lt23369tp5oawy1/Phyo%20Wai%20Aung.pdfPhyo Wai Aung Summary only...